म कत्तिको जिम्मेवार छु? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी उम्बुन्डु एस्टोनियन ओसेसियन किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार डच डेनिश तेलगु त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बम्बारा बिसाउ गिनियन क्रिओल बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन वोलफ शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
जिम्मेवार हुनु भनेको के हो?
जिम्मेवार हुनु किन आवश्‍यक छ?
म कसरी अझ जिम्मेवार व्यक्‍ति बन्‍न सक्छु?
म सधैं, धेरैजसो, कहिलेकाहीं, कहिल्यै पनि . . . छु/छैनँ।
यीमध्ये कुनचाहिं गुण तपाईंमा धेरै छ?
ती गुणहरूमा अझै प्रगति गर्दै जानुहोस्‌।—फिलिप्पी ३:१६.
कुनचाहिं गुण विकास गर्न तपाईंले अझ मेहनत गर्नुपर्छ?
निम्न जानकारीले ती गुणहरू विकास गर्न मदत गर्नेछ।
एक जिम्मेवार व्यक्‍तिले आफ्नो घर, स्कुल र समाजमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ। आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ भन्‍ने कुरा बुझेको हुन्छ। त्यसैले उसले गल्ती गऱ्‍यो भने आफ्नो गल्ती मानिलिन्छ, माफी माग्छ र गल्ती सुधार्न सकेसम्म प्रयास गर्छ।
म जिम्मेवार हुनु किन आवश्‍यक छ?
जिम्मेवार व्यक्‍तिले आफूसँग भएको सीप र कला बुद्धिमानी भई प्रयोग गर्छ। सबैले उसलाई भरोसा गर्छन्‌, जसले गर्दा उसले थप स्वतन्त्रता र सुअवसर पाउँछ।
बाइबल भन्छ: “आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई तँ देख्छस्‌? त्यसले राजाहरूका सामु सेवा गर्नेछ।”—हितोपदेश २२:२९, NRV.
जिम्मेवार व्यक्‍ति उदार मनको हुन्छ र उसका असल साथीहरू हुन्छन्‌।
बाइबल भन्छ: “दिने गर अनि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पनि दिनेछन्‌।”—लूका ६:३८.
जिम्मेवार व्यक्‍ति कुनै काम पूरा गर्न सकेकोमा खुसी हुन्छ, जसले गर्दा उसको आत्मविश्‍वास पनि बढ्‌दै जान्छ।
बाइबल भन्छ: “तर हरेकले आफ्नो काम जाँचोस्‌, तब उसले अरूसित तुलना गरेर होइन तर आफ्नै काममा रमाउने कारण पाउनेछ।”—गलाती ६:४.
यो प्रश्‍नको जवाफ पत्ता लगाउन तल दिइएका टिप्पणीहरू पढ्‌नुहोस्‌। तपाईंको विचार कुन टिप्पणीसँग मिल्दोजुल्दो छ?
“मलाई सधैं बच्चा जस्तो व्यवहार गर्नुभएको देखेर वाक्कै लाग्छ। एक घण्टा बाहिर निस्कन पनि ममी-ड्याडीलाई सोध्नुपर्ने!”—केरी
“मेरो ममी-ड्याडीले मलाई साथीहरूसँग बाहिर जान कुनै रोकटोक गर्नुहुन्‍न।”—रिचार्ड
“मेरा साथीहरूले विभिन्‍न कुरा गर्न छुट पाएको देख्दा अचम्म लाग्छ। ममी-ड्याडीले मलाई त्यस्तो गर्न किन दिनुहुन्‍न?”—आन
“ममी-ड्याडीले मलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्न दिनुहुन्छ। त्यस्तो स्वतन्त्रता पाएकोमा एकदम खुसी छु।”—मरिना
निष्कर्ष: केही युवाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ?
तथ्य: तपाईंले अरूको भरोसा जत्ति जित्नुहुन्छ, त्यत्ति नै स्वतन्त्रता पाउन सक्नुहुन्छ।
माथि उल्लेख गरिएका दुई युवाको उदाहरण विचार गरौं।
रिचार्ड: “कुनै समय ममी-ड्याडीलाई मैले स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो। तर जिम्मेवार भई स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हुनाले अहिले उहाँहरू मलाई भरोसा गर्नुहुन्छ। म कहाँ अनि कोसित जाँदै छु भन्‍ने कुरा उहाँहरूलाई लुकाउँदिनँ। बरु उहाँहरूले सोध्नुअघि नै आफ्नो योजनाबारे बताउँछु।”
मरिना: “ममी-ड्याडीलाई अहिलेसम्म दुई चोटि मात्र झूट बोलेको छु। दुवै पटक उहाँहरूले मेरो झूट पक्रनुभयो। त्यसपछि बल्ल इमानदार हुन सिकें। उदाहरणको लागि, म के गर्दै छु भनेर उहाँहरूलाई सधैं बताउँछु अनि म बाहिर हुँदा फोन गर्छु। अहिले उहाँहरू मलाई धेरै भरोसा गर्नुहुन्छ।”
तपाईं केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ—काम कि मनोरञ्जनलाई?
के तपाईं पनि रिचार्ड र मरिनाको जस्तै स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ? निम्न क्षेत्रमा आफैलाई जाँच्नुहोस्‌:
के तपाईं घरको काम राम्ररी पूरा गर्नुहुन्छ?
के तपाईं तोकिएकै समयमा घर आउने-जाने गर्नुहुन्छ?
के तपाईं आफ्नो भाइबहिनीलाई माया र ममी-ड्याडीलाई आदर गर्नुहुन्छ?
यीमध्ये कुनचाहिं बुँदामा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
बाइबल भन्छ: “आफ्ना आमाबाबुप्रति आज्ञाकारी होओ।”—एफिसी ६:१.
के तपाईं आफ्नो गृहकार्य समयमै सिध्याउनुहुन्छ?
के तपाईं आफ्नो पढाइमा उन्‍नति गर्न मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंको अध्ययन गर्ने राम्रो बानी छ?
बाइबल भन्छ: “बुद्धिलाई चिन्‍नेले त्यसबाट जीवन पाउँछ।” (उपदेशक ७:१२) राम्रो शिक्षाले तपाईंको बुद्धि बढाउँछ।
तपाईंले कमाउनुभएको नाम
के तपाईं आमाबाबुप्रति इमानदार हुनुहुन्छ?
के तपाईं पैसाको उचित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं भरोसा गर्न योग्य हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरामा तपाईंको राम्रो नाम चलेको छ?
बाइबल भन्छ: “नयाँ व्यक्‍तित्व धारण गर्नुपर्छ।” (एफिसी ४:२४) तपाईं आफ्नो बानी सुधार्न सक्नुहुन्छ र राम्रो नाम कमाउन सक्नुहुन्छ।
सुझाव: आफूले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र रोज्नुहोस्‌। त्यस क्षेत्रमा राम्रो उदाहरण बसालेका व्यक्‍तिसँग कुरा गर्नुहोस्‌ अनि उनीहरूको सल्लाह माग्नुहोस्‌। त्यस क्षेत्रमा उन्‍नति गर्न चाल्न सकिने केही खास कदमबारे नोटमा लेख्नुहोस्‌ र त्यसमा उन्‍नति गर्नको लागि महिनाभरि के-कस्तो प्रयास गर्नुभयो, याद गर्नुहोस्‌। आफूले गर्न सकेको र गर्न नसकेको कुराहरू लेख्नुहोस्‌। महिनाको अन्तमा तपाईंले के-कति उन्‍नति गर्नुभयो, हेर्नुहोस्‌।
“दिइएको स्वतन्त्रता छोराछोरीले कसरी प्रयोग गर्छन्‌, त्यसको आधारमा मम्मी-ड्याडीले थप स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। त्यसैले आफूले पाएको स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दा उहाँहरू हामीलाई अझ स्वतन्त्रता दिन इच्छुक हुनुहुनेछ।”—टाइलर
“कति स्वतन्त्रता दिने भन्‍ने सन्दर्भमा मम्मी-ड्याडीले पनि सिकिरहनुभएको हुन्छ। त्यसैले चाहिनेजति स्वतन्त्रता पाइएन भनेर निराश नहुनुहोस्‌।”—एस्लिन
कसैलाई प्रेरणाको स्रोत बनाउँदा तपाईंले समस्याहरूदेखि जोगिन, लक्ष्य र सफलता हासिल गर्न मदत पाउनुहुनेछ। तर तपाईंले कस्ता व्यक्‍तिहरूलाई प्रेरणाको स्रोत बनाउनुपर्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म कत्तिको जिम्मेवार छु?